Afrika Mainty · Marsa, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Marsa, 2009
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Marsa, 2009
Karaiba 11 Marsa 2009
Omaly no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, ary nampiasa ny mozika sy ny tononkalo ary ny zava-kanto ireo mpitoraka bilaogy miteny Frantsay hankalazana ny kanto, ny fandresena ary ny tolona tsy an-kiato ho an'ny vehivavy. Tany Martinika dia nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ny alalan'ny fandefasana...
Oganda 02 Marsa 2009
Mitombo hatrany ny famahanam-bolongana ataon’ireo mpitoraka blaogy ao Oganda ho toy ny seraseram-pifandraisana ho an’ny haisoratra, sy tontonokalo anterineto, manjary malaza izao ny fanaovan-tantara fohifohy sy ny andian-tantara.
Nizeria 02 Marsa 2009
Efa elaela ihany izay, kanefa noho ny zava-misy dia tsy niandry ny fiainana hanantona azy izy – afaka tenenina hoe nanampy amin’ny fitazonana ny hadalana ny famahanam-bolongana rehefa nisedra ny kotro-baratry ny zavatra entin’ny fiainana izy. Tao anatin’ny ady sarotra sy tahotra, hehy sy tomany, no nanohizan’ireo vehivavy Afrikana ny fitantarana ny tantaran’izy ireo, ny fifampiazarana ny dian’izy ireo miaraka amin’Andriamanitra. Taonan’ny fivoarana ho an’ny rehetra ny taona 2008. Tohin’ izany ary dia ho taonan’ny fahamatorana ny taona 2009.